Hiran State - News: HS:- Xarumahii dowlada oo la kala iibsanayo magalada Mogdisho
HS:- Xarumahii dowlada oo la kala iibsanayo magalada Mogdisho
HS:- Mudo ku dhawaad bil ah waxaa magaalada Mogdisho ka bilaawday qorshe xarumaha dowlada looga saarayo shacab intooda badan ka soo jeeda gobolada Galgaduud iyo Koofurta Mudug oo mudo 21 sano deganaa halkaasi mudadii ay deganaayeena xarumaha dowlada ku dhaldhalay caruur aan waligood arag degaanada aanu kor ku soo xusnay ee kaliya ku barbaaray iney dhismayaahani ay dhaxal u leeyahiin waalidkood.
Dowlada kumeel gaarka ah oo mudo bil ka hor bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka u sheegtay iney dib u howl galineyso xarumahii dowlada sida wasaaradaha iyo dhismooyinkii ay deganaan jireen shaqaalaha dowlada. shacab careysan oo aad uga xun in laga saaro gurigii hooyooyinka iyo bacadlahii Xamarweyne ayaa dib u degaya xarumo kale oo ay dowladu laheyd amaba dhismayaashii danta guud sida warar sugan lagu helayo.
Wararkii ugu danbeeyey ee naga soo gaaraya magaalada Mogdisho ayaa sheegayo in si aan caadi aheyn loo kala iibsanayo dhismayaashii dowlada sida guryahii Xamar Bile iyo kuwii ceymiska qaranka. waxaa kale oo lagu soo waramayaa in dhulal banaan oo ay dowladu horey u laheyn intooda badana loogu talo galay in lagu abuuro dhir xiliyadii beri samaadkii laga dhistay cooshash.
Marka xaalada magaalada Mogdisho dhinackasta laga eego waa faanoole fari kama qodna 90%na wali xarumahii dowlada waa la degan yahay kuwii gaarka loo lahaane warkooda ka tag ayuu yiri Hasan yare oo ka mid ah qoysaska kunool xaafada Xamar jadiid.
Masiibada ku dhacday bulshada Mogdisho waxaa ugu weyn waxaa hal meel shaah ku wada cabayo nin degan guri uusan laheyn oo caruur ku dhaldhalayo iyo mid xoog kunool ah oo noloshiisa la xarbinaya.
Dhawaantan ayey aheyd markii qoysas badan u dacwoodeen safiirka dowlada Turkiga kuna dhaheen intii aadan wadankaan imaan waligood lagama hadal xarumaha aanu degan nahay markii aad tiri anigaa dhisayo bey balaayo timid, sidaane dowlada Turkiga aduunyada ugu sheegto ineysan iyadu dalbanin in shacabka laga saaro guryaha.
Waa aduunyo Awrkeeda caloosha laga rarayo nin la leeyahay dalkaada ayaan kuu dhisayaa oo caasimadii ayaan kuu qurxinayaa oo dacwo ka ah arintaas ayey tiri haweeney maagceeda ku soo gaabisay Asli. sikastaba dhacdooyinkaan aan bulshada magaalada Mogdisho ku cusbeyn dalka intiisa kalese ka ah wax dhegaha bulshada ku cusub ceebna ka ah in la kala iibsado hantida qaranka maalmaha inagu soo aadan ayey si weyn u soo shaac baxeysaa xitaa hadii hada laga aamuso.
La soco wararkeena danbe magacyada iyo qabiilada ay ka soo jeedaan beelaha xalaaleystay hantida qaranka iyo mida sida gaarka ah loo leeyahay si aad xog ogaal u noqoto hadii aad tahay wadani Soomaaliyeed oo ay dalka mar hore ugu danbeysay.
· admin on March 08 2012 11:02:12 · 0 Comments · 2656 Reads ·
14,569,532 unique visits